အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို(24 များအတွက်စုစုပေါင်း အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို ထုတ်ကုန်များ)
အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
စာနယ်ဇင်း dewatering ပန်းကန်နှင့်ဘောင်လေဟာနယ်သည်ရွှံ့နွံ
tag ကို: solid-အရည် Separation ရွှံ့နွံစာနယ်ဇင်း Filter ကို , အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို , သတ္တုဗေဒပြားနှင့် Frame က Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
ဒါကြောင့်စက်မှုထုတ်ကုန်မှကြွလာသည့်အခါလူများစွာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, filter ကိုစာနယ်ဇင်း၏နာမကိုအကျွမ်းတဝင်နေသောလူမျိုးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခေတ်မီစက်မှုဆောက်လုပ်ရေးကဤအဆင့်မြင့်စက်မှုထုတ်ကုန်ကနေကွဲကွာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆုံး၌ filter...
ဘောင် filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက်
DSF-Y ကို-70 လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
tag ကို: DSF-Y ကို-80s Electromagnetic Pulse Valve , DSF-Y ကို-90 Electromagnetic Pulse Valve , DSF-80-AS Electromagnetic Pulse Valve
PPS aramid polyester filter ကိုအိတ်
tag ကို: ဆန့်ကျင် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု Filter ကို Bag , Glass ကို Fiber ဖုန် Filter ကို Bag , သွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်အိတ်
Dusting အိတ် ဒါဟာ flue ဓာတ်ငွေ့ကနေဖုန်မှုန့်ခွဲခြားသောကိရိယာများသည်။ အဆိုပါအိတ် filter ကိုလည်း filter ကို type ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်းဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာခြောက်သွေ့အကျိုးရှိစွာဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည်။...
ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဝေဟင်အသံအတိုးအကျယ် 1000-5000 m3 / ဇအိတ် filter ကို
tag ကို: ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက် 1000-5000 M3 / ဇဖုန်ဖယ်ရှားရေး , High Quality Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက် 1000-5000 M3 / ဇဖုန်ဖယ်ရှားရေး
ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဝေဟင်အသံအတိုးအကျယ် 1000-5000 m3 / ဇအိတ် filter ကို ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ သင့်လျော်သောစက်ပစ္စည်းများ, သတ္တုဗေဒ, ရော်ဘာ, မုန့်ညက်, ဓာတု, ဆေးဝါး, ကာဗွန်, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, သတ္တုတွင်းနှင့်အခြားယူနစ်။ 1.High...
tag ကို: Lime လညျးမီးဖို၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထုတ်ကုန်များ , ဖြူလညျးမီးဖို၏ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , Ash ကိုလညျးမီးဖိုဖုန်ကောက်ခံရေး
tag ကို: Grey ကလညျးမီးဖိုအတွက်ဖုန်ကောက်ခံရေးအမျိုးအစား , ဖြူလညျးမီးဖို၏ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , Ash ကိုလညျးမီးဖိုဖုန်ကောက်ခံရေး
ပြည်တွင်းရေဆိုးကိုကုသအတွက် filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက်
tag ကို: မိလ္လာကုသမှု Filter ကို , စဉ်ဆက်မပြတ် Band Filter ကို , စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းစက်များအတွက်စာနယ်ဇင်း Filter
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameter သည် မော်ဒယ်စွမ်းဆောင်ရည် parameters တွေကို filter ဧရိယာ (M2) filter ကိုပန်းကန်ပုံသဏ္ဍာန် (မီလီမီတာ) filter ကိုပန်းကန်အထူ (မီလီမီတာ) filter ကိုကိတ်မုန့်အထူ (မီလီမီတာ) filter ကိုအခန်းထဲကအသံအတိုးအကျယ် (L), (55097305, M3)...
DC က 24 V ကိုသွေးခုန်နှုန်းဂျက်အဆို့ရှင်စွပ်အိတ်
tag ကို: Air ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် Valve Pulse , AC အမြှေး Valve , Pneumatic Electromagnetic Valve 220V
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve, သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်မြှေး, နွေဦး, လေယာဉ်မှူးဦးခေါင်းစက်ရုံဆိုင်များတွင်ဖြစ်ကြသည်။ ကုန်းပြင်မြင့်အမျိုးအစား, N282 ကွိုင်ဗို့ DC24v AC220v 1 လက်မ 1.5 လက်မ2လက်မ 2.5 လက်မ 3...
YGHB type ကိုအနိမ့်ဗို့အားကိုထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်
tag ကို: အမျိုးအစားအနိမျ့ဗို့အား Pulse Valve မြှေး , ထိန်းချုပ်ထား Pneumatic Solenoid Valve မြှေး , DFFY-40 Solenoid Valve AC1V
(စမြှေးအဆို့ရှင်ကိုခေါ်) ကိုလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ဟာသွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးစနစ်၏ချုံ့လေကြောင်း switch ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုတူရိယာ၏ output signal...
tag ကို: စက်ဓာတ်ငွေ့ Solenoid Valve welding , အသေးစားအနိမျ့ဖိအား Solenoid Valve , ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုသံမဏိ Pulse Valve
ပထမဦးစွာ ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာညာဘက်ထောင့်လေယာဉ်မှူးမြှေးယင်းမတိုင်မီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မြင့်သောဆေးထိုးအသံအတိုးအကျယ်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း,...
နစ်မြုပ်လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် DMF-Y ကို
tag ကို: သွေးခုန်နှုန်းပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြချက် Solenoid Valve , BZCJ အမျိုးအစား Pulse Solenoid Valve , ဘယ်မူလစာမျက်နှာကောင်းဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တွေဖြစ်တဲ့လျှပ်စစ်သံလိုက်သို့မဟုတ် pneumatic အဖြစ်လေယာဉ်မှူးအဆို့ရှင်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒါဟာဓာတ်ငွေ့ခုခံမှတစ်ဆင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စွမ်းရည်များနှောင့်နှေးသဖြင့်, ထို input ကိုရှည်လျား signal...
tag ကို: KXD-1 / KXD-II ကို Electromagnetic Pulse Valve , ညာဘက်ထောင့် Electromagnetic Pulse Valve , နစ်မြုပ် Dedusting Solenoid Valve
tag ကို: သုံးလက်မဖုန် Solenoid Valve ကိုဖယ်ရှားခြင်း , ခြောက်လ Split ကို Pulse Solenoid Valve , DCF-4 Dedusting Differential Valve
အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခြေအနေများ: လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ကိုအသုံးပြုသည်သောအခါ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအခွအေနလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်၏ပုံမှန်ချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးမှဆက်စပ်တည်းဟူသောအလွန်အရေးကြီးလှသည်။...
tag ကို: နှစ်ဦးကိုလက်မနှင့်တစ်ဝက် Solenoid Valve , သုံးလက်မ Electromagnetic Pulse Valve , နစ်မြုပ်နှင့် Dedusting Solenoid Valve
KXD-1 / KXD-II ကိုလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
tag ကို: QMFD-20P ပေါင်းစည်း Valve , Valve ချိတ်ဆက်ခြင်း DMF-ZM-25 မြန်နှုန်း , Valve ချိတ်ဆက်ခြင်း DMF-ZM-40 မြန်နှုန်း
1, သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်: အသွေးခုန်နှုန်း signal ကိုအဆို့ရှင် type ကိုအဆို့ရှင်သို့ဓာတ်ငွေ့ခုခံမှတစ်ဆင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှု, သဘာဝဓာတ်ငွေ့စွမ်းရည်နှောင့်နှေးခြင်း, input ကိုရှည်လျား signal ကိုအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်သံလိုက်သို့မဟုတ်...
လက်ရှိတွင်နိုင်ငံခြား command ကိုဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုကနေလျှပ်စစ်သံလိုက်ပဲမျိုးစုံကာကွယ်ပေးနိုင်၏တိကျသောနည်းလမ်းများ,...
Air ကို filter ကိုခွဲခြာဆိုင်ကလုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: စက်မှု Air ကို Filter ကိုခွဲပေး , စက်မှု Filter ကိုဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု Air ကိုခှဲ Filter Deduster
အိတ် filter ကိုအတူဆိုင်ကလုန်း separator
tag ကို: သွေးခုန်နှုန်းဂျက်စက်မှု Bag Filter ကို , စက်မှုလေတပ်ဆိုင်ကလုန်းခြား , Pulse Ejector နှင့်အတူဆိုင်ကလုန်းခြား
ဘိလပ်မြေစက်ရုံလေထု filtration ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဆိုင်ကလုန်း filter ကို
tag ကို: ဘိလပ်မြေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Air ကို Filter ကိုဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး
ဘိလပ်မြေစက်ရုံလေထု filtration ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဆိုင်ကလုန်း filter ကို ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းခွဲခြာရေဝဲခွဲခြာမှတဆင့် filter များ၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဘဲတစ်ဦးလေကြောင်းကနေဓာတ်ငွေ့စီးမှုန်ဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။...
စာနယ်ဇင်း dewatering ပန်းကန်နှင့်ဘောင်လေဟာနယ်သည်ရွှံ့နွံ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘောင် filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DSF-Y ကို-70 လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PPS aramid polyester filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဝေဟင်အသံအတိုးအကျယ် 1000-5000 m3 / ဇအိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ash ကိုလညျးမီးဖိုမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြည်တွင်းရေဆိုးကိုကုသအတွက် filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DC က 24 V ကိုသွေးခုန်နှုန်းဂျက်အဆို့ရှင်စွပ်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
YGHB type ကိုအနိမ့်ဗို့အားကိုထိန်းချုပ်အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နစ်မြုပ်လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် DMF-Y ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DMF-ZM-25 မြန်နှုန်းကိုဆက်သွယ်ထားသောအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
KXD-1 / KXD-II ကိုလျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Air ကို filter ကိုခွဲခြာဆိုင်ကလုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ် filter ကိုအတူဆိုင်ကလုန်း separator အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေစက်ရုံလေထု filtration ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဆိုင်ကလုန်း filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို from China, Need to find cheap အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Hydraulic ဖိအား Filter ကို, We'll reply you in fastest.
woodshop မြေမှုန့်စုစည်းသည့်စနစ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ